Muddee 24, 2015
Itti-aanaa dura-taa’aan Koongiresa Federaalawa Oromoo – Obbo Beqqelee Garbaa, har’a galgala gara sa’atii kudha-lamaa fi walakkaatti mana isaanii Adaamaa jiru irraa qabaman - oduu jedhu dhaga’uu keenya dura, hoogganootaa fi miseensota isaa gameeyyii dabalee namoonni hedduun humnoota mootummaan kan hidhamaa jiran ta’uu, Kongiresiin Federaalawa Oromoo beeksisee jira.
Barreessaa jaarmayichaa – Obbo Beqqelee Nagaa akka ibsanitti, itti-aanaa barreessaan paartichaa fi ogeessi seeraa – Obbo Dajanee Xaafaa, har’a magaalaa Finfinnee, naannawa Giyoorigis jedhamutti qabaman.
Hoogganoonni fi miseensonni paartichaa, keessumaa kanneen filannoo biyyolessaa dabre irratti dorgoman martinuu hidhamanii jiran, jechuun ni danda’ama, jedhan – Obbo Beqqeleen. Aangawoota Poolisii Federaalaa Itidyoophiyaa fi ka Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa irraa himannaa kanaaf haga ammaatti deebii argachuu hin dandeenye.
Guutummaa gaaffii fi deebii Obbo Beqqelee Nagaa waliin geggeessamee dhaggeeffadhaa